सार्वजनिक स्थलमा फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोनलाई किन हा’नियो झा’पड ? - Nepali in Australia
सार्वजनिक स्थलमा फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोनलाई किन हा’नियो झा’पड ?
June 9, 2021 autherLeaveaComment on सार्वजनिक स्थलमा फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोनलाई किन हा’नियो झा’पड ?
पेरिस : फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनलाई सार्वजनिक स्थलमा झा’पड हा’निएको छ। भीडलाई नजिकबाट अ’भिवादन गर्ने क्रममा एक व्यक्तिले मंगलबार झा’पड हा’नेका हुन्। उनलाई झा’पड हा’निएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको हो।
राष्ट्रपति माक्रोनले दक्षिणी फ्रान्सको भ्रमणका क्रममा त्यहाँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर भी’डमा नमस्कार गर्दै एक पुरुषको नजिक पुगेका थिए। भिडियो फु’टेजका अनुसार उनले ती पुरुषसँग बोल्न खोज्दै हात मि’लाउन खोज्छन्। तर ती पुरुषले उनको गा’लामा च’ड्कन हा’न्छन्।
लगत्तै ती पुरुषलाई सु’रक्षाकर्मीले नियन्त्रण गरेको देखिन्छ भने राष्ट्रपति मा’क्रोनलाई तुरुन्तै सु’रक्षित स्थानतिर लगेको देखिन्छ। यद्दपि राष्ट्रपति मा’क्रोन फर्केर पुनः कार्यक्रममा सहभागी भएको बताइएको छ। हालसम्म ती पुरुषले माक्रोनलाई कि’न झा’पड हा’ने भनेर उनको नि’यत प्रष्ट खुलिसकेको छैन।
तर उनले भी’डमा पहिले नै ‘मों’जुवा सान्ट डे’नी’ भनेर चि’च्याएका थिए। त्यो ना’रा फ्रान्सेली इतिहासका राजा शा’र्लामेनको समयसँग जो’डिएको बताइएको छ। सो घ’टनापछि दुई जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिइएको फ्रा’न्सेली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूले अधिकारीहरूले सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ।
Exclusive: नेपाल भूमिमा भारतीय SSB को दादा’गिरी, धेरै बोले खेतबाटै लग्ने ध*म्की ! नेपाली हेरेको हेरै, (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौको घट्यो यो डरलाग्दो घ`टना, साबधान रहनुहोला
भुलभुलेमा भूकम्पले घर भत्कि`एपछि घर भित्रै पुरि`एको मान्छे`लाई यसरी निकालिदै (भिडियो हेर्नुहोस्)
May 19, 2021 May 19, 2021 auther
जनकपुरमा भेटिए यस्ता अनौठा पुरुष, बिश्व किर्तिमान राखेर नेपाललाई बिश्व सामु चिनाउने यस्तो छ धोको